🥇 uphendlo lwezicelo zomsebenzisi
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 901
Ividiyo yokubalwa kwezicelo zomsebenzisi
Uku-odola ingxelo yezicelo zomsebenzisi
Ukuphendula ngezicelo zomsebenzisi sisalathiso somsebenzi wabathengi esivumela ukuhlalutya ukusebenza kwesebe lokuthengisa. Ukuzenzekelayo kunceda ekuphenduleni kwezicelo zomsebenzisi. Uninzi lwethu luqhele ukusebenzisa i-imeyile okanye i-Excel kunye noogxa bayo njengeenkqubo zobalo. Ewe, ukubeka idatha enokucocwa ngokufanelekileyo kwaye ihlelwe ngokufanelekileyo sisixhobo esisisombululo sokusombulula izixhobo ezisisiseko. Nangona kunjalo, xa kuziwa ekuxhaseni, ekufayiliseni nasekuphatheni izicelo, i-imeyile kunye ne-Excel ayizizixhobo ezifanelekileyo. Emva kwayo yonke loo nto, umzekelo, abavumeli ukuthumela izaziso, kubandakanya iSMS. Izicelo zophicotho-zincwadi ezivela kwinkqubo yabasebenzisi, ngokuchaseneyo nezixhobo zeetabhula ezilula, zivumela ukumiliselwa kweendlela ezahlukeneyo. Ayigcini ngokugcina iirekhodi zezicelo zabasebenzisi kodwa ikwagcina inkqubo yokulungiselela ukuthengiswa, ukurekhoda inyani yentengiselwano, ukubonelela ngenkxaso yolwazi kumthengi, kunye nokuncedisa kwimisebenzi yasemva kwenkonzo. Inkqubo yokwenza isicelo somsebenzisi-nkqubo evela kwinkampani yenkqubo yeSoftware yeUSU yimveliso elula neqondakalayo yomsebenzisi. Kuphuhliso, unokuzibhalisa ngokulula izicelo ngaphandle kokuchitha ixesha kuzo, kuba izicelo zibhaliswe ngokuzenzekelayo. Banokuthunyelwa kubhaliso ngokuzenzekelayo nge-imeyile, abathunywa kwangoko, kwivenkile ekwi-Intanethi, ngokuxhomekeke kukudityaniswa kwe-Intanethi. Ngokumalunga nokuzalisa amaxwebhu, inokwenziwa ngemowudi ezenzekelayo, umzekelo, gcwalisa iinkcukacha ngokuzenzekelayo. Kwinkqubo ye-USU yeSoftware, uya kufumana ilog yezicelo ezivela kumsebenzisi, iifilitha ezahlukeneyo ziyafumaneka kuyo ukuze nangaliphi na ixesha, ufumane idatha oyifunayo, xa, umzekelo, umsebenzisi elinda impendulo kuye izicelo. Abathengi bakho baya konwaba ngenkonzo. Iigodo ziqulathe ikhadi lezicelo, elinolwazi malunga nomsebenzisi kunye nezicelo. Ikhadi lezicelo likwajongeka lilula kwaye lichanekile. Ukulawulwa kwengxelo kubaluleke kakhulu kulawulo lwetikiti. Ukuzenzekelayo i-USU-Soft ikulungele ukukunceda ngale nto, iyanceda ukuba ungaphoswa yimihla ebekiweyo, ngexesha elifanelekileyo ikwazisa ngokugqitywa komsebenzi ukuze ungagqitywa. Ngale ndlela uyakwazi ukugcina umfanekiso wakho omhle kwaye abathengi bakho baya kongezwa. Inkqubo ye-USU Software iyakwazi ukwenza umsebenzi wabasebenzi ube lula kwaye ulungele, isicelo sihlala siphuculwa, sidibanisa itekhnoloji yamva nje, kwaye siphuhliswa ngokukodwa kwinkampani nganye. Ngeqonga, unokuqhubekeka amaxwebhu angaphakathi nangaphandle avela kubaxhasi, oku kuququzelelwa kukudityaniswa kwesiza. Ukuhamba kwedatha ngokukhawuleza, kwaye kusebenze ngokukhawuleza okukhulu, amanani agciniweyo, anokulungela ukubeka iliso ekusebenzeni kwabasebenzi nakwintlangano iphela. I-USU-Soft inezinye izibonelelo ezicacileyo ngenxa yenkqubo, kunokwenzeka ukwenza ugcino-mali olupheleleyo lwezezimali, ezorhwebo, ezabasebenzi, ezolawulo, kunye nokuqhuba uhlalutyo olunzulu ngeengxelo zolwazi. Ngokusebenzisa izixhobo, unokusebenza ngezixhobo ezahlukeneyo, iinkqubo, abathunywa, kunye nolunye ulwazi. Wonke umthengi ubalulekile kuthi, unokuyivavanya inkqubo ngokusebenza ngokukhuphela ingxelo yovavanyo lwe-USU Software. Naliphi na inqanaba lomsebenzi ngamaxwebhu alula, asebenzayo, kwaye akumgangatho ophezulu. Lawula umbutho wakho ngokufanelekileyo ngeqonga elilumkileyo elivela kwiUSU Software.
Inkqubo ye-USU yeSoftware yenza inkqubo yokubalwa kwezicelo zomsebenzisi ilula kwaye isebenze. Ngoncedo lweUSU-Soft, uyakwazi ukubanceda ngokuchanekileyo abathengi kwaye ubabonelele ngenkxaso yolwazi. Usebenzisa isoftware ye-USU, unokulawula ngokufanelekileyo amanqanaba entengiselwano kunye nokubonelela ngenkxaso yomsebenzisi.
Zonke izicwangciso zobalo-mali, amanyathelo obalo kwi-odolo nganye anokufakwa kwinkqubo yobalo. Inkqubo yobalo-mali kulula ukuyisebenzisa kwaye iyahambelana netekhnoloji yakutshanje. Inkqubo ngokulula nangokukhawuleza ingenisa idatha yokuqala malunga nabathengi bakho okanye izicelo, malunga nombutho, oku kunokwenziwa ngokungenisa idatha okanye ngokufaka idatha ngesandla. Kumsebenzisi ngamnye, uyakwazi ukufaka isixa somsebenzi ocwangcisiweyo, ekugqibeleni, ubhalise isenzo sobalo-mali esenziwe
Inkqubo isebenza nawo onke amaqela emveliso kunye neenkonzo. Enkosi ngenkqubo yobalo, ungagcina uluhlu lweenkcukacha ngokubanzi kunye neenkcukacha. Imveliso ezenzekelayo inokuqwalaselwa ukuze izivumelwano, iifom, kunye namanye amaxwebhu agcwaliswe ngokuzenzekelayo.
Ulawulo lwengeniso yenkampani kunye neendleko ziyafumaneka. Isoftware ibonisa ubalo lwamanani lwezicelo kunye nezicelo ezigqityiweyo, nangaliphi na ixesha ungalandela imbali yokunxibelelana nomsebenzisi ngamnye. Ukubeka iliso kwintsebenziswano nabathengisi kuyafumaneka. Kwisoftware, uyakwazi ukugcina ubalo lweenkcukacha zemali kunye nolawulo. Iqonga lidibanisa nefoni. Enkosi kwisoftware, ungalawula amasebe kunye nolwahlulo lolwakhiwo. Usebenzisa isoftware, unokuseta uvavanyo lomgangatho weenkonzo ezibonelelweyo. Inkqubo inokuqwalaselwa ukuba idityaniswe neeterminal zokuhlawula. Wonke umsebenzisi uyayithanda uyilo oluhle kunye nemisebenzi elula yesoftware. Ukudityaniswa kweleta yocingo kunokwenzeka. I-USU-Soft ihlala iguqukela ekudibaniseni netekhnoloji yakutshanje. I-USU-Soft sisixhobo sanamhlanje esinoluhlu olubanzi lwemisebenzi yesoftware. Kwimakethi yesicelo esikhoyo, zininzi iinkqubo zokucelwa kwabasebenzisi, ukubala inani lezaphulelo kunye nesisa, kodwa uninzi lwazo luxinekile kumxholo obanzi kakhulu kwaye awuthatheli ngqalelo ikhonkrithi yombutho othile. Abanye babo bayaphoswa kukusebenza okufunekayo, abanye banemisebenzi 'eyongezelelweyo' ekungekho ntlawulo ingcono kuyo, konke oku kufuna uyilo lomntu ngamnye lwenkqubo kwiimfuno zenkampani. Nantsi inkqubo ye-USU yeSoftware.